Iwu mmanye: Ikwenye ka o gaghi ekwe? | Law & More B.V.
blog » Iwu mmanye: Ikwenye ka o gaghi ekwe?
Onye Ọchịchị na-elekọta
IWU ỌKA Iwu
KWESACR LA LAWYER
Onye ọrụ ụlọ ọrụ
BBỌCH C OLTOLTA Iwu
WLỌ ỌRIV Alụkwaghịm
AHWR LA ỌR
EZIN FLỌ EGO
ONYE OWU AMLỌ
ỌR OFF ỌR OFF N’ ADBAMRAM AH .R.
LỌ M-L-- & MBA ỌRATION MBA
INTELLECTUAL PROPERTY (IP) ỌKAWU
IWU ỌR LA
MERGERS & AKỌ
Iwu nkwụ ụgwọ
PHILANTHROPY & Ọrụ ebere
Ezigbo Iwu Iwu
OGWU ANA EGO
EGO Europe & CIS
Iwu nke obodo
PARMA & ND & sayensị
ANYANWU NEUTLANDS DUTCH
Njikọ LAwa IWU
AKWKWỌ AKW .KWỌ AKGKỌ
Iwu mmanye: Ikwenye ka o gaghi ekwe?
Onye ji ụgwọ na enweghịzi ike ịkwụ ụgwọ ya ji ụgwọ nwere nhọrọ ole na ole. Ọ nwere ike ịgba akwụkwọ maka nke ya odida ego ma ọ bụ tinye maka ịbanye na ndokwa nhazi usoro iwu. Onye na-binye ego nwekwara ike itinye akwụkwọ maka ụgwọ nke onye ji ya ụgwọ. Tupu a nabata onye ji ụgwọ na WSNP (Natural Persons Debt Restructuring Act), ọ ga-agabiga usoro udo. N’usoro a, a na-agba mbọ ka anyị na ndị binyere anyị ihe niile kpezie. Ọ bụrụ na otu onye ma ọ bụ karịa ndị na-agbazinye ego ekwenyeghị, onye ahụ ji ya ụgwọ nwere ike ịrịọ ụlọ ikpe ka ọ manye ndị ahụ jụrụ ịjụ ụgwọ ka ha kwenye na nkwekọrịta ahụ.
Emezi nkwekọrịta a na-achịkwa iji mezuo iwu. Onye na-akwụ ụgwọ ga-etinye akwụkwọ arịrịọ maka nkwekọrịta a na-amanye ya n'ụlọ ikpe n'otu oge ahụ dị ka ngwa maka ịbanye na WSNP. N'ikpeazụ, akpọrọ ndị niile ji ego azụ ka ha gee ntị. Nwere ike mgbe ahụ nyefere a dere ozize ma ọ bụ ị nwere ike itinye n'ihu gị agbachitere n'oge ntị. Courtlọ ikpe a ga-enyocha ma ị ga-ajụrịrị mkpebi udo ahụ. A ga-eburu ọdịiche dị n'etiti mmasị gị na ịjụ na ọdịmma nke onye ji ụgwọ ma ọ bụ ndị ọzọ na-agbaziri ụgwọ nke ịjụ. Ọ bụrụ na ụlọ ikpe ahụ kwenyere na ị gaghị ajụ iji ezi uche kwenye na nhazi nke ụgwọ, a ga-enye arịrịọ maka itinye iwu mmanye. Mgbe ahụ ị ga-ekwenye na nkwekọrịta ahụ enyere gị wee nwee ịnakwere ịkwụ ụgwọ nke nkwupụta gị. Na mgbakwunye, dị ka onye na-ajụ ụgwọ, a ga-enye gị iwu ịkwụ ụgwọ nke usoro ihe a. Ọ bụrụ na etinyeghị iwu mmanye ahụ, a ga-enyocha ya ma enwere ike ịnabata onye ji gị ụgwọ na nhazigharị ụgwọ ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụhaala na onye ji ụgwọ akwụ ụgwọ arịrịọ ahụ.
Ikwesiri ikwenye dika onye ji ego?
Ebe mbido bụ na inwere ikike ịkwụ ụgwọ zuru ezu nke nkwupụta gị. Ya mere, na ụkpụrụ, ị gaghị ekwenye na ịkwụ ụgwọ ele mmadụ anya n'ihu ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ (amicable).
Lọ ikpe a ga-atụle ihe dị iche iche na ọnọdụ dị iche iche mgbe ọ na-atụle arịrịọ ahụ. Onye ọka ikpe ga-enyocha akụkụ ndị a:
ekwuru ihe a chọrọ nke ọma;
ndị otu nọọrọ onwe ha na ndị ọkachamara tụlere atụmatụ nhazigharị ụgwọ ahụ (dịka ụlọ akụ kredit akwụmụgwọ);
emeela ka o doo anya na onyinye a bụ oke nke na ekwesiri ịkwụ ụgwọ ji ego nwere ike ịme;
nhọrọ nke enweghị ego ma ọ bụ nhazigharị ụgwọ na-enye ụfọdụ atụmanya maka onye ji ya ụgwọ;
nhọrọ nke enweghị ego ma ọ bụ nhazigharị ụgwọ na-enye ụfọdụ atụmanya maka onye ji ụgwọ: kedụ ka o si bụrụ na onye ahụ jụrụ ịkwụ ụgwọ ga-enweta otu ego ma ọ bụ karịa?
o yikarịrị ka imekọ ihe ọnụ na nhazi nkwekọrịta iji gbaghaa asọmpi maka onye ji ụgwọ;
enwere ụkpụrụ maka okwu ndị yiri ya;
kedu ihe oke mkpa nke ego onye ji ụgwọ na nrube isi zuru oke;
kedu akụkụ nke ụgwọ a na-akwụ site n'aka onye na-agbazinye ego;
onye na-agbazinye ego jụrụ ịnọrọ naanị ya na ndị ọzọ ji ụgwọ na-ekwenye na ụgwọ ụgwọ;
enweburu nkwekọrịta udo ma ọ bụ mmanye a na-etinyebeghị nke ọma. 
E nyere ihe omuma atu ebea ka oputa ihe dika onye ikpe ji enyocha okwu di otua. N'okwu ikpe nke Courtlọikpe Mkpegharị Ikpe na Den Bosch , a tụlere na onyinye nke onye ji ya ụgwọ nye ndị ji ya ụgwọ n'okpuru nkwekọrịta udo agaghị ewere dị ka oke nke enwere ike ịtụ anya na ọ ga-enwe ego . Ọ dị mkpa iburu n'uche na onye ji ụgwọ ka dị obere (afọ 25) na, nwere obere n'ihi afọ ahụ, nwere, n'ụkpụrụ, inwe ikike inweta nnukwu ikike. Ọ ga-enwe ike mezue ntinye ọrụ na obere oge. N’ọnọdụ ahụ, a ga-atụ anya na onye ji ụgwọ ahụ ga-enwe ike ịchọta ọrụ a na-akwụ ya. Enweghi olile anya nke oru di na ndokwa iji kwụọ ụgwọ. N'ihi ya, ọ gaghị ekwe omume n'ụzọ ziri ezi ịchọpụta ihe ụzọ mbugharị iwu ga-enye n'ihe metụtara nsonaazụ. Ọzọkwa, ụgwọ nke onye na-ajụ ụgwọ, DUO, mere ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụgwọ ahụ dum. Courtlọ ikpe mkpegharị bụ nke chere na DUO nwere ike jụ ịjụ ịnabata nkwekọrịta udo ahụ.
Ihe atụ a bụ naanị maka ihe atụ. E nwekwara ọnọdụ ndị ọzọ ọ gụnyere. Ma onye na-binye ego ò nwere ike jụ ikwenye na nkwekọrịta udo ahụ dị iche na otu esemokwu. Ọ na-adabere kpọmkwem n'ihe ndị mere na ọnọdụ. You na-eche nkwekọrịta idozi? Biko kpọtụrụ otu n'ime ndị ọka iwu na Law & More. Ha nwere ike ịdọrọ gị nchekwa ma nyere gị aka n’oge ịnụrụ ikpe.
 Courtlọ ikpe mkpegharị 's-Hertogenbosch 9 Julaị 2020, ECLI: NL: GHSHE: 2020: 2101.
 Courtlọikpe Mkpegharị 's-Hertogenbosch 12 Eprel 2018, ECLI: NL: GHSHE: 2018: 1583.
Previous Post Esemokwu Tequila
Next Post Ọrụ nke onye were gị n'ọrụ na onye ọrụ dịka Iwu Ọnọdụ Ọrụ
Mbata- & Mbugharị Iwu
Mpaghara Pụrụ Iche
Ọ B MR IN AKW MKWỌ AKW ??KWỌ AKW ??KWỌ AH ?? ??
Ndị ọka iwu anyị nọ ọrụ gị.
Kpọọ: +31 40 369 06 80
ma ọ bụ hapụ nkọwa gị n'okpuru
Divgba alụkwaghịm Glossary
Usoro mkpesa ụlọ ọrụ
Onye ọka iwu azụmahịa
Lawlọ ọrụ ọka iwu
Onye omekome omekome
Onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm
Ọpụpụ ọka iwu mbata na ọpụpụ
Ibu onye ọka iwu
Anyị nwere ike ịtụ aro?